« Malagasy Mandray Andraikitra » Nahatsiaro manokana an’ireo reny mifonja
Foloalindahy Malagasy Tsy hanaiky fanakorontanana
Mangina tanteraka hatreto ny foloalindahy, hafa ny tamin’ny taona 2009. Amin`ny ankapobeny, sarotraho azy ireo aloha no hirona any amina loko politika, indrindra amin`izao ankatoky ny fifidianana izao.
Minisiteran`ny fitsarana Mpitsara 10 hiakatra CODIS anio
Naaton`ny minisiteran`ny fitsarana ny fifaninanana hidirana ho mpianatra mpirakidraharaha sy mpitsara amin`ny taom-piofanana 2018-2019.
Maitre Olala “Tokony hanaiky valim-pifidianana izy roalahy.”
Azo lazaina ho ain-dehibe hiatrehana ny ho avin’I Madagasikara ny adihevitra nifanatrehan’ireo kandida ho filoham-pirenena roalahy tao amin’ny TVM.
Gazety Tia Tanindrazana 400 Ariary manomboka anio
400 ariary manomboka anio alarobia 12 desambra no hanjifanao ny gazety Tia Tanindrazana. Fanapahan-kevitra tsy maintsy noraisina manoloana ny fiakaran’ny vidin’ny taratasy fampiasa amin’ny fanontana gazety eo amin’ny tsena iraisam-pirenena io.
Famonoana polisy tany Fenoarivo Atsinanana Olona 21 no nampidirina am-ponja
Raha 18 ireo olona nampidirina am-ponja vonjimaika rehefa nandalo ny fampanoavana tao Toamasina ny alatsinainy lasa teo mikasika ny raharaha nahafatesana polisy miiisa 3 tany Fenoarivo Atsinanana izay niharana ny fitsaram-bahoaka dia tafiakatra 21 izy ireo amin`izao fotoana izao .
Gazety boky Trandraka 04 Mampibaribary ny tsy fanajana ny zon`olombelona
Mandrafitra ny gazety boky Trandraka laharana fahefatra ny lahatsoratra miisa 9 nosoratan`ireo mpanao gazety18 avy amin`ny faritra manerana an`i Madagasikara.
Gazety boky Trandraka 04 Mampibaribary ny tsy fanajana ny zon`olombelona eto Madagasikara
« Tsy manadino anareo izahay na misy io tamboho be manasaraka antsika io aza », hoy ny filohan’ny fikambanana MMA na Malagasy Mandray Andraikitra ao Toamasina izay saika isan-taona dia misy hatrany ny fiaraha-mifety sy fanoloran’izy ireo fanomezana ireto reny sy vehivavy mifonja eo anivon’ny fonjaben’i Toamasina Ambalatavoahangy.
Miisa 79 ireo reny sy vehivavy izay bevohoka ny iray mifonja nomen’ireto tanora ireto fanomezana noho ny fetin’ny reny izao, teo koa ireo zazakely miisa efatra manaraka an-dreniny raha efa afaka noho ny filasalasana azon-dreniny ny zoma teo koa nandritra ny fitsarana ny raharahany ilay zaza kambana niaraka tamin-dreniny tao anatin’ny iray volana teo tao Ambalatavoahangy. Nandritra izao fanolorana fanomezana nataon’ny fikambanana MMA ny alahady misandratr’andro teo izao koa no nanomezan’izy ireo toky fa haloan’izy ireo indray ny famandrihana herintaona amin’ny « canal satellite » misy ao amin’ireo faritra natao ho an’ny reny sy vehivavy mifonja ao Toamasina ireto, noho ny fangatahana nataon’izy ireo noho ity fahitalavitra ity anisan’ny fialamboly sy fanalan’izy ireo ny rarisainany araka ny fanazavan’ireo mpandraharaha ny fonja. Naneho ny faniriany koa nandritra izao famangian’ny MMA azy ireo izao Rtoa Margueritte 70 taona izay zokiben’ireto reny sy vehivavy mifonja ireto fa « aza mba mamaly ratsy amin’ny ratsy izany, valio soa ny ratsy ataon’olona aminao », raha ny fanazavany dia mifonja mandritra ny 15 taona hifarana afaka roa volana ny tenany noho ny fitoriana natao azy ho nanao vono olona tany Vohitsoa Vavatenina. Toraka izany koa Rtoa Jacqueline izay sady efa very vola 26 tapitrisa ariary no voapozina saika maty niditra hopitaly dimy andro, raha nikasa hividy fiara nefa tojo andian’olona « mpamosavy » sy jiolahy ka miandry fitsarana am-ponja miaraka amin’ny vady sy ny anadahiny ankehitriny. Ankoatra izay dia miakatra be ny isan’ny voafonja ao Ambalatavoahangy tato ho ato noho ny fahamaroan’ny mpanao heloka ao Toamasina. Efa 1.236 ny isan’izy ireo ankehitriny ary tafakatra 80 latsaka ny vehivavy, nefa hatramin’izay dia tsy mihoatra ny 40. Tsy mahazaka afa-tsy manodidina ny 600 ny faritra ho any lehilahy.